झ्याल र बालकनीमा रंग थप्न ५ ह्याङ्गिङ प्लान्टहरू | बेजिया
मारिया vazquez | 14/06/2022 12:00 | घर
झ्यालहरूमा झुन्ड्याउने बिरुवाहरू राख्नुहोस् यसले पूर्णतया अनुहार परिवर्तन गर्दछ। यसले रंग र आनन्द ल्याउँछ र तिनीहरूलाई धेरै आकर्षक बनाउँछ। उनीहरूलाई केही समर्पण चाहिन्छ, तर वर्षको यस समयमा हाम्रो भूगोलको भ्रमण गर्दा फूलहरूले भरिएका ती बालकनीहरूलाई मनन गर्न कसलाई रमाइलो लाग्दैन?
त्यहाँ धेरै बिरुवाहरू छन् जसको साथ हामी उज्यालो गर्न सक्छौं हाम्रो बालकनीहरु वसन्त देखि पतन सम्म। यद्यपि, बीचमा फ्याँक्ने बिरुवाहरू हामीले हाम्रा मनपर्नेहरू फेला पार्यौं। चम्किलो रंगहरूमा फूलहरू भएका बिरुवाहरूलाई फरक हेरचाह चाहिन्छ।
सर्फनिया यसको सजिलो खेतीको कारण एक धेरै सामान्य बाहिरी बोट हो। तिनीहरू दक्षिण अमेरिकाको मूल निवासी Solanaceae परिवारसँग सम्बन्धित छन् र petunias को सबैभन्दा बलियो प्रजातिहरू मध्ये एक हो। तिनीहरूको झुण्डिएको असर वर्तमानको लागि विशेषताहरू तुरही आकारका फूलहरू जसमा विभिन्न रङका साथै दुवै चिल्लो र लहरा किनाराहरू हुन सक्छन्।
यो बिरुवा गुच्छामा बढ्छ र छ भाँडो र प्लाटरहरूमा बढ्नको लागि आदर्श। जहाँ ग्रीष्महरू धेरै तातो हुन्छन्, तिनीहरूलाई अर्ध-छायामा राख्नु राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई दिनको कम्तिमा छ घण्टा घाम लाग्ने सुनिश्चित गर्दै, प्राथमिकता बिहान। फूल फुल्ने बिरुवाहरूको लागि सब्सट्रेटमा ढिलो-रिलीज उर्वर थप्नको लागि तिनीहरूलाई रोप्दा यो सुविधाजनक हुन्छ र जुलाईमा, तिनीहरूको पहिलो फूल फुल्ने पछि, तिनीहरूको आकार कायम राख्न सबैभन्दा लामो काँडहरू (20% भन्दा बढी) को हल्का छाँट्नुहोस्।
Calibrachoa को बारहमासी बिरुवाहरु को एक जीनस हो surfinias जस्तै परिवार जसले वसन्तदेखि गर्मीको अन्त्यसम्म साना घण्टी आकारका फूलहरू उत्पादन गर्छ। यसको वृद्धि बानी घस्रने छ र त्यसैले यसलाई उचाइमा भाँडो वा टोकरीमा रोप्दा यसको हाँगाहरू र फूलहरू झुण्डिन्छन्।
Calibrachoa एक बिरुवा हो जसको उचाई 20 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुँदैन। यसको फूलहरू साना छन् तर यसको धेरै प्रचुर मात्रामा र प्रचुर मात्रामा फूल फुल्छ यदि यसले सूर्यको आवश्यक घण्टा प्राप्त गर्दछ। सर्फिनियाहरू जस्तै, आदर्श यो हो कि यो बिहान यो घाम प्राप्त गर्दछ र प्रारम्भिक दिउँसो अर्ध छायामा रहन्छ।
तिनीहरूलाई राम्रो जल निकासी दिनुहोस्; पानीको अत्यधिक र अभाव दुवै हानिकारक हुन सक्छ। वाई डाँठहरू बन्द गर्नुहोस् pथप कम्प्याक्ट झाडीहरू र ठूलो फूलको साथ प्राप्त गर्न। धेरै प्रजातिहरू मध्ये, 'मिलियन बेल्स' क्यालिब्राचोस सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा फूल फुल्ने मध्ये एक हो।
आइभी वा गिटानिला गेरानियम विन्डोज र बालकनीमा रंग लगाउने सबैभन्दा लोकप्रिय प्रजातिहरू मध्ये एक हो। यो एक धेरै प्रतिरोधी बिरुवा हो, जसले यसको फूललाई ​​जाडोको समयसम्म कायम राख्छ यदि यसलाई पर्याप्त घण्टा प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश दिइन्छ। तिनीहरू पूर्ण घाममा राख्न सकिन्छ तर यो अर्ध-छायामा गर्न सजिलो हुन सक्छ। तिनीहरूले 30º सम्मको तापक्रमको सामना गर्छन् तर सुरक्षा बिना5डिग्री भन्दा कम तापक्रम।
वसन्त र गर्मीमा तपाईले गेरानियमलाई बारम्बार पानी दिनुपर्छ, पानी जम्नेसँग सावधान रहनुहोस्। यस समयमा, थप रूपमा, यो केहि समावेश गर्न सुविधाजनक हुनेछ फूल फुल्ने बिरुवाहरूको लागि मल प्रत्येक 15 दिन।
के तपाईंको झ्यालले केही घण्टा घाम पाउँछ? Fuchsias केहि फूल झुण्डिएको बिरुवाहरु मध्ये एक हो जुन तपाईले भाँडोमा राख्न सक्नुहुन्छ र छायामा। उनीहरूलाई चाहिन्छ, हो, फस्टाउनको लागि केही घण्टा घाम। तीन पर्याप्त हुन सक्छ। Fuchsias पनि फ्रस्ट समर्थन गर्दछ। जाडो आउँदा तिनीहरूले पात र फूलहरू गुमाउनेछन्, तर तिनीहरू वसन्तमा फेरि बाहिर आउनेछन्।
फुचसियाका केही प्रजातिहरू झाडीदार हुन्छन् र सीधा बढ्छन्, तर तपाईंले अरूलाई झुण्डिएको पनि पाउनुहुनेछ। यो रोपिएको सब्सट्रेट थोरै अम्लीय र निकासको सुविधाको लागि छिद्रयुक्त हुनुपर्छ। सिँचाइको सन्दर्भमा, यो फूल फुल्ने मौसममा प्रशस्त हुनुपर्छ, ताकि माटो ओसिलो रहन्छ (जल जमेको छैन)।
एपिटेमिया हो रसीला घिमिरे र अफ्रिकाको मूल निवासी द्रुत विकास। यसको पातहरू हरियो र मासुदार हुन्छन् र यसको फूलहरू सामान्यतया गुलाबी हुन्छन्, यद्यपि यो रातो वा सेतो प्रजातिहरू फेला पार्न सम्भव छ। यो धेरै सजिलै गुणा; केवल बिरुवाको टुक्रा काट्नुहोस् र यसलाई सीधा जमिनमा टाँस्नुहोस्।
यो एक बिरुवा हो जसलाई धेरै प्रकाश चाहिन्छ, यद्यपि यसले अर्ध-छाया स्थानहरू सहन सक्छ। खडेरी सहनु, यद्यपि यो प्रचुर मात्रामा र नियमित पानीको साथ राम्रो फुल्नेछ यदि यसलाई राम्रो जल निकासी प्रदान गरिएको छ। यसले निरन्तर फ्रस्टलाई समर्थन गर्दैन, तर यसले -5ºC सम्मको तापक्रमको सामना गर्न सक्छ। जाडोमा थर्मल कम्बलको साथ सबैभन्दा चिसो ठाउँहरूमा यसलाई वसन्तमा फेरि रमाइलो गर्नको लागि सुरक्षित गर्न पर्याप्त हुनेछ।
आफ्नो बालकनी सजाउन यी मध्ये कुन झुण्डिएको बिरुवा राम्रो लाग्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » झ्याल र बालकनीमा रंग थप्न ५ वटा ह्याङ्गिङ प्लान्टहरू
नेटफ्लिक्सको शीर्ष श्रृंखला: 'एक उत्तम आमा'